Kooxda Manchester City oo kula dagaalamaysa Liverpool saxiixa Nabil Fekir – Gool FM
(Manchester) 26 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay Liverpool kula dagaalanto saxiixa Weeraryahanka naadiga Lyon ee Nabil Fekir.
Fekir ayaa la soo sheegayaa inuu qarka u fuulay inuu ku biiro kooxda Liverpool xagaagii la soo dhaafay, laakiin kaliya xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa ku fashilmay inuu ka gudbo tijaabada caafimaad, sababo la xiriira dhibaatooyin dhanka jilibka ah oo uu muddo dheer ka sheeganayey.
25-sano jirkaan ayaa ku raaxaystay xilli ciyaareed kale oo uu la qaatay kooxda Les Gones lagu naanayso waxaana uu u dhaliyey 12 gool, isagoo u sameeyey sagaal caawin 39 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.
Madaxweynaha Lyon ee Jean-Michel Aulas ayaa xaqiijiyey in Fekir uu ka tagi karo Lyon xagaagan, iyadoo heshiiskiisa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka 2019-20.
Wargeyska The Sun ayaa warinaysa haatan in kooxda Liverpool ay diyaar u tahay inay dib u soo nooleyso xiisihii ay u qabtay xiddigan, laakiin Reds waxa ay wajahaysaa tartan adag oo kaga imaanaya Man City, kuwaasoo kooxda Jurgen Klopp maalintii ugu dambeysay xilli ciyaareedka hal dhibic kaga qaaday horyaalka Premier League 2018-19.
Fekir ayaa dhaliyey 69 gool waxaana uu caawiyey 46 gool oo kale 193 kulan oo uu u saftay kooxda Lyon tartammada oo dhan.
Tiemoue Bakayoko oo Tababare Antonio Conte kula biiraya kooxda Inter Milan